आजदेखि २९ गतेसम्म सेयर लगानीकर्ता रिले अनसन बस्दै, राष्ट्र बैंकले पुरा गर्ला माग ? - Arthatantra.com
आजदेखि २९ गतेसम्म सेयर लगानीकर्ता रिले अनसन बस्दै, राष्ट्र बैंकले पुरा गर्ला माग ?
काठमाडौं । सेयर लगानीकर्ताले आज (बुधबार) देखि २९ गतेसम्म माइतिघर मण्डलामा दैनिक २ घन्टा रिले अनसन बस्ने भएका छन् । पुँजी बजार सुधार सङ्घर्ष समितीले आजदेखि माइतीघरमा ३ देखी ५ बजेसम्म रिले अनसन बस्न लागेको लागेको जनाएको छ ।
पछिल्लो समय सुरु भएको आन्दोलनको नेतृत्वकर्ता दिपेन्द्र अग्रवालका अनुसार बुधबार दिउँसो ३ देखी ५ बजेसम्म मण्डलामा रिलेअनसन हुने छ । पहिलो चरणमा भदौ २९ गतेसम्म रिले अनसन गर्ने उहाँको भनाई छ ।
उक्त अवधिमा राष्ट्र बैंक समक्ष बुझाएका १८ बुँदे माग पुरा नगरेको खण्डमा २९ गतेपछि आमरण अनसन बस्ने तयारीमा संघर्ष समिति रहेको छ । त्यसको लागि भने स्थान तय भएको छैन । समितिले सोमबार नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता देव कुमार ढकाललाई १८ बुँदे मागसहितको ज्ञापनपत्र बुझाएको छ ।
राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत एक बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ४ करोड रुपैयाँ र एक व्यक्तिले बढीमा १२ करोड रुपैयाँमात्रै सेयर धितोमा कर्जा लिन पाउने गरेको व्यवस्थापछि लगानीकर्ता त्यसको विरोध गर्दै आन्दोलित बनेका छन् ।
राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति आएको तीन महिना नभइ आफ्नो निर्देशन परिवर्तन नहुने दाबी गर्दै आएको छ । यसले गर्दा लगानीकर्ताको माग पुरा हुने वा नहुनेमा भने अन्योल नै रहेको छ ।
वि.सं.२०७८ भदौ २३ बुधवार १०:२७ मा प्रकाशित
अघिल्लाे हकप्रद सेयर निष्काशन गर्न एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकले तोक्यो बुक क्लोज मिति, कहिले गर्दै ?
पछिल्लाे पुनर्बीमा कम्पनीले गर्यो लाभांश परिर्माजन, कति कायम भयो त बोनस र नगद कति ?